မန္တလေးမြို့တွင်းရှိ ရေမြောင်းများနှင့် ပလက်ဖောင်းများပေါ် ကျူးကျော် စိုက်ပျိုးထားရှိသည့် ? - Yangon Media Group
မန္တ လေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးမြို့တွင်း လမ်းလျှောက်သွားလာသူများ ယာဉ်တိုက်မှုအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေရေးအတွက် ပလက်ဖောင်းအဟောင်းများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြုပြင် ခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရေ မြောင်းများနှင့် ပလက်ဖောင်းများ ပေါ်သို့ ကျူးကျော်စိုက်ပျိုးထားရှိ သော အလှပန်းပင်များနှင့် ပန်းအိုးများကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းသွားတော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ သိရသည်။
”မကြာခင်မှာ မြို့တွင်းလမ်းတိုင်းမှာ မော်တော်ယာဉ်ရပ်နားဖို့ နေရာ Smart Parking စီမံချက်ကို စတင် တော့မှာဖြစ်သလို Precast စက်ရုံတည်ဆောက်ပြီးသွားရင်လည်း ပလက်ဖောင်းတွေကို ကပ်တုံးတွေ နဲ့ စနစ်တကျတည်ဆောက်ဖော် ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျူး ကျော်ပန်းအိုးတွေကို ကြိုတင်ဖယ်ရှားဖို့ အိမ်ရှင်တွေသိအောင် ဒီလထဲမှာ အသိပေးချက်တွေ ထုတ်ပြန်သွားပါမယ်။ ဖယ်ရှားဖို့ကို ကာလတစ်ခုသတ်မှတ်အချိန်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီကာလကျော်လွန်သွား ရင်တော့ ကော်မတီရဲ့၊ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဦး ကျော်ဇောအောင်က ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားသည်။
အသေလောင်းထားသည့် ကွန်ကရစ်အဆင်းအတက်တံတားများကို ဖျက်သိမ်းကြရန် ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ကာ လာရောက်ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရပါက အိမ်ပိုင်ရှင်မှ ဖျက်သိမ်းခကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့တွင်းရှိ ပလက်ဖောင်းအများစုမှာ အသုံးပြုမရတော့ဘဲ လမ်းလျှောက်သွားလာသူများသည် လမ်းမကြီးများပေါ်တက်၍ သွားလာရသဖြင့် ယာဉ်တိုက်မှုအန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့ နေရခြင်း၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ ကို ဖြစ်ပွားစေခြင်း၊ ကွန်ကရစ်အတက်အဆင်းများကြောင့် ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရေးအတွက် မြောင်းဆယ်ယူလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ နေရခြင်းတို့ကြောင့် စီမံချက်ဖြင့် ဖယ်ရှားအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Smart Parking စီမံချက်မစတင်ခင် မြို့တွင်းလမ်းများပေါ်တွင် စည်း ကမ်းမဲ့ယာဉ်ရပ်နားမှုများကို ထိရောက်စွာ ဖမ်းဆီးအရေးယူလျက်ရှိရာ ကျူး ကျော်ဈေးရောင်းချမှုများကို အဓိကဖယ်ရှားရှင်းလင်းသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အောင်လံမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များအတွင်း ကလေးများတွင် ဝက်သက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုများပြားလာသဖြင့် ဆေ??
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် မြစိမ်းရောင် စီမံကိန်းချေးငွေမှ ငါးနှစ်အတွင်း အတိုးငွေကျပ် သ??